Ụmụaka amụrụ ohụrụ ndị na-ama ihe 'ex' | Apg29
Aftonbladet na-ede :
New York City ke United States ka ẹkenam a atọ iwu okike. Ọ na-akpọ "X" na afọ nke ndị obodo onye na ha ma nwoke ma nwaanyị nwere ike ugbu a na-agbanwe ha okike. Nke a na-eme site na-ejuputa na a na ụdị na mesie na mgbanwe e mere ka "na-egosi ha ezi okike njirimara," na-ede USA Today.
"Iji niile trans na-abụghị ọnụọgụ abụọ na New York: Anyị ịhụ gị, ịnụ ị na-akwanyere gị ùgwù. Site 2019, niile New York na-agbanwe ha okike na ha ọmụmụ akwụkwọ M, F ma ọ bụ X - enweghị ike na akwụkwọ, "ka onyeisi obodo Bill de Blasio na Twitter. M bụ "onye," F nke "nwanyị" (nwanyi) na X bụ ọhụrụ na-anọpụ iche, mmekọahụ.
Nke a ọ pụtara na ha nwere ike ịgbanwe uche ya otu ụbọchị, nwaanyị ndị ọzọ na "X" na-atọ, dabere na otú ha na-eche ụbọchị? Ụwa na-mgbagwoju anya!
Ọ n'ezie mwute maka ndị na-na-n'agha maka mmetụta ha.
M bụ a mgbe gara aga n'ime ratsit.se ebe ị pụrụ ịchọ ndị mmadụ. Ọ dịghị "mmekọahụ" ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ma "iwu okike". Ha nwere, ndị ọzọ okwu, na-agbanwe echiche.
Nke a pụtakwara na mgbe "iwu okike" na "mmekọahụ" abụghị otu ihe ahụ. "Gender" bụ ihe ị na-amụ na na "iwu okike" bụ ihe ị na-ahụ na a na-na-eme na eziokwu.
Tupu taa, m dere banyere ndị ogbenye 26-afọ nwanyị Loui Aja onye na-eche ọ mụrụ na ndị ọjọọ okike. Biko gụọ isiokwu: Ọ bụrụ na a mụrụ gị na-ezighị ezi ahụ, ị nwere ike a mụrụ ọzọ .
Anyị kwesịrị ma ekpe ekpere maka ndị na-emeri ha maka Jesus. Ọ bụ ha na nzọpụta na nnapụta. Na Jesus Christ, anyị na-ahazi ndụ anyị ma na-ezi njirimara.
The egwu bụ ma ọ bụrụ na a ụgha mmekọahụ foisted na-emeghị ihe ọjọọ ụmụ. Ndị nne na nna na New York nwekwara ike ịtọ "X" na nwa ọhụrụ ha nwa. Egwu! A nwatakịrị malitere ndụ ya nke ịbụ onye "ex"!
Kpee ekpere maka anyị na ụmụ anyị na-enye ha, Jizọs mere ka ha we jide Ya. Mgbe ahụ, ha ga-abụ 'ihe ex', ma mgbe ahụ, ha na-eto eto ruo ná nchebe adabako ndị mmadụ.
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 04:47